Fanaratoana ~ Journey-Assist - fitsangatsanganana jono. Endri-javatra.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » fanjonoana
Ny fitsangatsanganana ny jono dia fomba iray fialamboly fizahan-tany, ny tena kendrena dia ny misambotra trondro isan-karazany sy ny mponin-tany hafa. Ny fizahan-tany toa izany dia ny jono sy fialamboly. Ny antontan'isa dia mampiseho fa olona maro izay tonga amin'ny toerana ambony (mpandraharaha, mpahay siansa, mpanao politika) ary mpankafy mpanjono lehibe.
Izay tafiditra ao anatin ny fitsangantsanganana mpanjono
Inona no tadiavina rehefa misafidy fizahantany
Ny toerana malaza indrindra amin'ny fitsangatsanganana mpanjono.
Ny orinasam-paritany dia manolotra fitsangatsanganana fanjonoana, mandritra ny fotoana azo anaovana jono:
Rano mafana na ranomasina.
Avy amin'ny sambo na avy amin'ny morontsiraka.
Amin'ny ririnina na fahavaratra.
Amin'ny trondro mpirenireny, trondro semi-predatory na hohanina.
Miaraka amin'ny fanampian'ny fihodinana, hazo fisakafoanana ambany, zerkla, mitsingevana, karavasy.
Ny firenena malaza indrindra amin'ny fizahan-tany manarato manerana izao tontolo izao dia ny UK, Belize, Australia, Venezoelà, Italia, Espana, Mexico, Kazakhstan, Turkey, Thailand, Norvezy, Russia, Finland, Etazonia, Soeda.
Inona no tafiditra amin'ny fitsangatsanganana jono
Ny fitsangatsanganana ny jono dia safidy voafaritra tsara ho an'ny asa ivelany. Betsaka ny orinasa mpandehandeha dia misy fitsangatsanganana toy izany ao amin'ny lisitry ny serivisy hanintonana ny mpanjifa maro araka izay tratra. Matetika ny fitsidihana toy izany dia misy serivisy manaraka ireto:
Fandefasana ny mpandeha ho any amin'ny toerana fanjonoana.
Akomodina fizahan-tany (hotely, trano fialam-boly, ary trano fisakafoanana azo ampiasaina).
Sakafo ho an'ny fialan-tsasatra.
Fandaminana ny jono.
Ao koa ny fitsangatsanganana jono dia misy serivisy fanampiny maro ahafahana manome fahafaham-po ny mpizahatany indrindra mitaky. Ny serivisy toy izany dia, ohatra, ny fanofana fitaovana fanjonoana, ny fitadiavana mpihaza matihanina, ny fanapahana trondro tratra ary ny fepetra raisina ho fitehirizana (famatsiam-bolo, ny sira, ny fifohana sigara). Ankoatr'izay, ny serivisy mpahandro mahay dia misy izay afaka manomana lovia trondro.
Tsara raha hanomboka ny fifantenana ny fitsangatsanganana mpanjono, manomboka amin'ny vanim-potoana taona. Mazava ho azy, tsy sarotra amin'izao fotoana izao ny hivoahan'ny fahavaratra amin'ny ririnina na ny mifamadika amin'izany. Noho izany antony izany, voalohany indrindra mila mamaritra ny fotoana tianao amin'ny taona. Mila manapa-kevitra ianao izay mahaliana anao - ny ririnina, amin'ny toerana mafana na amin'ny toe-tsaina milamina sy antonony. Rehefa avy nandray fanapahan-kevitra momba ity fepetra ity ianao dia afaka manaisotra avy hatrany ao amin'ny lisitra anao ny firenena maromaro izay tsy mifanaraka amin'ny fanirianao.
Betsaka ny firenena izay manome fitsangatsanganana fanjonoana, ary samy manana ny toetrany amin'ny toetrany. Ireo firenena jono manana toetrandro mafana (na ny ankamaroany) dia i Russia, i Kazakhstan, ary i Ukraine. Firenena mangatsiaka ho an'ny jono mpizaha tany - Soeda, Failandy, Norvezy, Islandy. Anisan'ireo firenena fanjonoana mafana i Thailand sy ny Isiraely.
Ny fitsangatsanganana manaraka dia ambaratonga manokana momba ny maha matihanina amin'ny sehatry ny jono. Zava-dehibe ny olona iray ny mandany ora maromaro hikarato trondro iray manokana, raha ny hafa kosa dia te-hihinana ny trondro irina ihany. Ireo faniriana roa ireo dia afaka mora foana miaraka amin'ny fanampian'ny masoivoho fitetezana.
Aorian'io dia tokony hieritreritra ny toerana misy anao ianao. Izy io dia mety trano fandraisam-bahiny azo aina, trano kely any amoron-tsiraka, trano fohy na lay. Zava-dehibe io ho an'ny tetibola, ary koa ho fahatsapana ny fitsangatsanganana ho azy. Azonao atao koa ny misafidy karazana reservoir sy ny manodidina azy. Tany mahafinaritra sy ny mpifaninana vitsivitsy dia iray amin'ireo sanda ilaina.
Ny toerana malaza indrindra amin'ny fitsangatsanganana mpanjono
Ity firenena ity dia manana farihy madio. Ny jono eto no be mpitia. Ny fitahirizan-kevitra malaza indrindra amin'ny fitsangatsanganana mpanjono dia ny Hoalan'i Finlandy sy ny helok'i Botanical. Fanjonoana mahavariana, mankafy ny tany mahavariana ary finaritra Finnish no omena eto.
Tsy mamela ny mpanarato tena tsy miraharaha ny fanaratoana eto amin'ity firenena ity. Eto dia homena na dia vao manomboka aza. I Norvezy dia paradisa marina ho an'izay tia ny farihy, ny ranomasina ary ny jono. Tsy misy isalasalana fa hahita trondro be dia be ianao ary hanana fihetseham-po be dia be, satria ny trondro no tratra eto mandritry ny taona. Ny anton'izany dia ny endri-javatra ara-jeografika sy tahiry trondro lehibe any an-dranomasina. Ny fanaratoana anaty sambo dia mahazatra kokoa noho ny morontsiraka. Ho an'ny fanjonoana ny tenany, afaka miala voly tsara ianao, mankafy ny kolontsaina eo an-toerana, ny fahandro Norvezianina ary ny toetra mahagaga.
Trondro ao an-dranomasina, sy renirano, fjord, ary farihy. Mandritra izany fotoana izany, ny safidy malaza indrindra dia ny jono an-dranomasina, izay tsy dia fantatra loatra amin'ny Rosiana, ary any amin'ny morontsiraka Norvezy dia afaka mahazo trondro be ianao amin'ny vanim-potoana rehetra. Ny stream Gulf mafana dia manafaka ny ranomasina amin'ny ranomandry amina faritany midadasika, manomboka any Stavanger ka Tromsø, ka tsy misy sakana ho an'ny mpanjono.
Firenena mety amin'ny fanjonoana fanatanjahantena. Ny mpanjono tena mendrika indrindra avy any amin'ny firenena rehetra dia mivory any Islandy mba handray anjara amin'ny fifaninanana mikendry ny hampiakatra ny salmon salmon.
Ao koa ny fifaninanana isan-taona ho an'ny fanjonoana ny salmon. Raha te handray anjara dia mila mahalala ny fitsipiky ny jono ary afaka mampiasa bara fanjonoana. Na ny tanora iray aza dia afaka mandrindra izany.
Tanindrazana manondrana jono. Eto dia manana fahafahana hisambotra trondro ianao, izay milanja 50 kg. Ho an'ny olona maro, toa mampientanentana tokoa ny fahatsinjovana izany.
Rosia dia firenena manana faritany midadasika. Noho ny halavany tsy takatry ny saina, dia afaka mameno ny fepetra takian'ny mpanjono mahay manavaka izy ireo. Rehefa any amin'ny faritra avaratra dia misy oram-be mivatravatra ka afaka mandeha manarato ranomandry, mamony ny voninkazo any amin'ny faritra atsimo, ka ny mpanjono no manarato anaty rano misokatra. Miditra amin'ny renirano Rosiana ny kiraron'aretina goavambe; Ny Siberia dia malaza amin'ny tazomoka. Noho izany, misy mpanjono ao Rosia dia afaka mahita farihy iray, ranomasina na renirano izay mifanaraka amin'ny tsirony.
Ny filanjana dia tsy vitan'ny filokana (indrindra eo amin'ny lehilahy) fa fomba iray tsara hialana sasatra mandritra ny fialantsasatra. Ireo mpitia fanjonoana izay te-hiala sasatra amin'ny dingana fanjonoana lavorary dia afaka mifandray amin'ny orinasa mpandehandeha izay hanolotra safidy ho an'ny dia lavitra any ivelany.
Fanatsarana sy fitsaboana
Faritra ao Sri Lanka. Avy aiza?
21.12.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Faritra Sri Lanka. Avy aiza? tsy misy
Onitra ho an'ny fahatarana ny sidina. AirHelp.
20.12.2019 / 1 Comment mirakitra ny onitra ho an'ny fahatarana ny sidina. AirHelp.
Cave (volamena) Tempolin'i Dambulla
19.12.2019 / Fanehoankevitra 3 amin'ny tempolin'ny Cave (Golden) ao Dambulla
15.12.2019 / Fanehoankevitra 14 amin'ny Tea any Sri Lanka
Hotely Zign Beach sy Wong Phrachan Beach
15.12.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Zign Hotel Beach sy Wong Phrachan Beach tsy misy
Sri Lanka Soso-kevitra alohan'ny mitsidika.
13.12.2019 / Fanehoankevitra 4 mankany Sri Lanka. Soso-kevitra alohan'ny mitsidika.
11.12.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny firaketana Fitsipika momba ny fitaterana entana amina fiaramanidina tsy misy
11.12.2019 / Fanehoankevitra 4 amin'ny Dongtan Beach
Bacco Beach Pattaya
11.12.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Pantai Bacco. Pattaya tsy misy
Ho any Chiang Mai avy any Bangkok. Ny fiaramanidina. Ny lamasinina. Ny bus
07.12.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Chiang Mai avy any Bangkok. Ny fiaramanidina. Ny lamasinina. Ny bus tsy misy
Ny fanofana fiara ao Sri Lanka
06.12.2019 / Fanehoankevitra 2 amin'ny fanofa-fiara ao Sri Lanka
Ny fanofana bisikileta ao Sri Lanka
06.12.2019 / Fanehoankevitra 4 amin'ny fanofana bisikileta Sri Lanka
Torolàlana Wong Amat
04.12.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny Wong Amat Beach tsy misy
04.12.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Jomtien Beach Pattaya tsy misy
Fampisehoana lehibe ao Pattaya
03.12.2019 / fanehoan-kevitra momba ny fampisehoana olon-dehibe Pattaya tsy misy
Nandeha an-tongotra / arabe mandeha
02.12.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny lalana mandeha an-tongotra / Làlana mandeha tsy misy
01.12.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny fanampiana voalohany tsy misy
Pattaya Golden Buddha Hill (Big Buddha Hill)
30.11.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Pattaya Golden Buddha Hill (Big Buddha Hill) tsy misy
Pattaya Ban Amphur Beach
29.11.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny morontsiraka Ban Amphur any Pattaya (Ban Amphur Beach) tsy misy
29.11.2019 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Pantai Sar Saray tsy misy